ထိုင္းတြင္ ေဆးကုေနေသာ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ နိဳ၀င္ဘာ(၈)ရက္ ျပန္ေရာက္မည္၊ က်န္းမာေရး စိုးရိမ္စရာ မရွိေတာ့ဘဲ ပင္ပန္းေသာေၾကာင့္ဟုဆို - Mandalay In-depth
ထိုင်းတွင် ဆေးကုနေသော ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် နိုဝင်ဘာ(၈)ရက် ပြန်ရောက်မည်၊ ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ဘဲ ပင်ပန်းသောကြောင့်ဟုဆို
Mg Tar နိုဝင်ဘာ 5, 2019 10:08 ညနေ 0
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘဲ နိုဝင်ဘာ(၈)ရက်တွင် မန္တလေးသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမြတ်သူက ပြောသည်။
လက်ရှိ အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌလည်း ဖြစ်သူ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် ပင်ပန်းသောကြောင့် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူရခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ကြောင်း ဝန်ကြီး ဦးမြတ်သူက ဆိုသည်.
“အားလုံး အိုကေ။ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ပင်ပန်းလို့ပါ။ ပါတီမှာလည်း ဒုဥက္ကဌ၊ တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်း ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတော့ အများကြီး ပင်ပန်းတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ(၂၃)ရက်က မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကျောက်စိမ်းရောင်းချပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် နှင့် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ။ Photo – Bhone Nay (Mandalay In-depth News).
အသက်(၆၈) နှစ်အရွယ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် သည် ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ ထိုးနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေကြောင်း ဒီချုပ်ပါတီ တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ အောက်တိုဘာ(၂၄)ရက်က ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပါတီ၊ အစိုးရ၊ လွှတ်တော် တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် ဆေးဝါးကုသနိုင်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟု ဆိုသည်။
ထိုသို့ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်နေစဉ်အတွင်း ၎င်း ကျန်းမာစေရန်အတွက် ဟုဆိုကာ နိုဝင်ဘာ(၁)ရက်က ကျောက်ပန်းတောငးမြို့တွင် ဒေသခံတစ်ရာကျော်က ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်။
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် သာမန်ရုံးဖွင့်ရက်ဖြစ်သည့် တနင်္လာမှ သောကြာနေ့များတွင် မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ပြီး ရုံးပိတ်ရက် စနေ၊တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ပါတီတာဝန်များ လုပ်ကိုင်ကြောင်း ၎င်းနှင့်နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ(၂၃)ရက်က မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကျောက်စိမ်းရောင်းချပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် နှင့် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ။ Photo – MGJEA
ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ (၁၅)ရက်ခန့်ကြာ သွားရောက်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ရောဂါဖြစ်ပွား၍ မည်သို့ ကုသမှုခံယူနေရသည် ဆိုသည်ကိုမူ ဒီချုပ်ပါတီ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများက တိတိကျကျ ထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်း မရှိပါ။
အောက်တိုဘာ(၂၃)ရက်က မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကျောက်စိမ်းရောင်းချပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ။ Photo – Bhone Nay (Mandalay In-depth News).